Warbixinta shaqsiga (somaliska) - Minabibliotek
Warbixintaada iyo wixii buug aad deynsatay ama dalbatay waxaa lagu keydin kombiyuutarka maktabada oo degaanka Umeå. Warbixin sida wixii aad deynsatay ama dalbatay waxaa saameyn sharciga furnaanshada iyo sir dhowrida[Offentlighets- och sekretesslagen]. Taasna micnaheeda tahay in shaqaalaha maktabada sharciga sir dhowrida qaban.
Warbixinta oo wixii aad deynsatay waa la masaxi marka aad soo celisid deynta, inta aanan ka eheen buugta la dhageysto, buugta aad ka dalbatid adeega la dhaho Boken waxaa kuu keeni boostaale. Warbixinta waxaa la keydin 10 sano.
Maktabada waxey warbixintaada sida magaca iyo cinwaanka ka dalban xafiiska dowlada oo warbixin keydinta[SPAR, Statens personadressregister].
Warbixinta shaqsiga waxaan u isticmaali sida sharciga difaacida warbixin kombiyuutar[dataskyddslagstiftning].
Guddiga degmada oo mas’uulka ka ah maktabada baa mas’uul ka ah ilaalinta warbixinta shaqsiga. Sababta aan u isticmaaleyno warbixintaada baa ah in aan diwaangalinkarno waxyaabaha aad deynsatay, dalbatay iyo wixii kharash aad bixineysid, iyo si aan kuula soo xiriirino. Arrinta waxey noqon mid sharciyeysan marka aad saxiidid warqada wada heshiinta si aad u helikartid kaarka maktabada iyo aad ansaxisid xeerarka deynsashada.
Warbixintaada waa la keydin ilaa inta aad haysatid kaarka maktabada. Adiga waxaa xaq u leedahay inaa kula qeybsano warbixinta aan kaa heyno, waxaa xaq u leedahay inaa saxno ama xad u yeelno iyo masaxno warbixintas, waa haddii dhammaan deymaha soo wada celisay iyo kharashka deyn jiro aad bixisay. Arrimahan midkood haddii aad dooneysid la soo xiriir maktabada.
Warbixinta aan kaa heyno waxaan la wadaagi degmooyinka kale oo gobalka Umeå kamid ah iyo Axiell Sverige, oo ah shirkada noo suubisay nidaamka maktabada. Anaga waxaan wada heshiin la galnay shirkada Axiell Sverige oo in warbixintaada si sax loo isticmaali. Warbixintaada looma diri wadan ka baxsan midowga yurub[EU/EES]. Waxaa suurtagal ah inaa warbixintaada la qeybsano dadkale oo markasna waxaa arrintas sabab u ah sharciga furnaanshada iyo warbixin qeybsashada[Offentlighetsprincipen].
Haddii aad dacwo ka tahay habka aan warbixintaada u isticmaalnay waxaa la xiriiri oo dacwo u dirsan hey’adda la dhaho Integritetsskyddsmyndigheten.
Warbixin oo qofka guddiga degmada mas’uulka ka ah warbixinta shaqsiga waxaad ka heli meeshan www.minabibliotek.se/personuppgifter ama la xiriir degmada aad ku nooshahay.